दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई भैसी वितरण – उजेली न्यूज
दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई भैसी वितरण
प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार २०:३४ June 7, 2021
मुसिकोट । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले वडा नं. ४ र १२ का किसानलाई भैसी बितरण गरेको छ । नगरपालिकामा प्राप्त संघिय सरकारको लागत साझेदारीको भैसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तरगत बिभिन्न समुहका सदस्यलाई भैसी बितरण गरिएको पशु सेवा शाखाले जनाएको छ ।
यस अघि शुक्रबार वडा नं. ४ सोलाबाङका किसानलाई भैसी बितरण गरिएको थियो भने आज सोमबार वडा नं. १२ को जमारुमा भैसी बितरण गरिएको छ । नगरपालीकालाई दुग्धजन्य पर्दाथमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्धेश्यले भैसी बितरण गरिएको हो । प्रत्येक किसानलाई २ ओटाका दरले भैसी बितरण गरिएको हो ।
अव वडा नं. ११, १२, १३ र १४ नम्वर वडाका किसानलाई भैसि बितरण गर्न बाँकी रहेको पशु सेवा साखा प्रमुख सरस्वति सापकोटा खड्काले जानकारी दिनुभयो । भैसि खरिदका लागि मुसीकोट नगरपालिकाको २१ लाख ८० हजार, संघिय सरकारको २१ लाख ८० हजार र किसानको ५ लाख खर्च भएको छ ।
जिल्ला भित्रै भैसि खरिद गरि किसानलाई बितरण गरिएको हो । जिल्लाको जुनसुकै ठाउँमा पनि पाल्न सकिने भैसी खरिद गरि बितरण गरिएको प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
आइतबार वडा नं. १२ मा नगर उप प्रमुख प्रेमकुमारी सुनार, आर्थिक बिकास समिति संयोजक कमला पुन, वडा अध्यक्ष प्रेम ओली लगायतको सहभागितामा भैसी बितरण गरिएको हो ।
Posted in अर्थ / वाणिज्य, कृषि, मुख्य समाचार, समाज
Previous: बाँफिकोटको बुरालमष्ट मन्दिरमा लाखौ नगद सहित सुनचाँदि र सिक्का चोरी
Next: जेठ २६ गतेबाट रुकुम पश्चिममा कोरोना विरुद्धको ‘भेरोसेल’ खोप लगाईने